नगरको विकासका लागि सबै एकमत हुनुपर्छ : मेयर जोशी ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँ गाउँमा अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी वनेका छन् । जनताको आवश्यकता हेरेर अहिले योजना वनाउने, दैनिक प्रसासनिक काम गर्ने र दिर्घकालिन महत्वका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्य भैरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रुपमा यि निकायमा रहेका जनप्रतिनिधीहरुले जनतालाई सेवा दिएका छन् । रोशन तिवारीले कुश्मानगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र जोशी संग कुराकानी गरेका छन् ।
१) तपाईं मेयर भएपछि नगरको समग्र विकासमा तपाईंले के काम थालनी गर्नुभएको छ ?
हेर्नुस पर्वतका ७ स्थानीय तहमध्ये कुश्मा नगरपालिका जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा विकासको दृष्टिले अगाडी छ । तैपनी हामीसंग समस्या र चुनौती भने नभएका हैनन् । जनताले चाँडै विकास होस भन्ने चाहन्छन् । मैले जनताको चाहना वुझेर विकासलाई कसरी तिव्रता दिन सकिन्छ भनेर पहिले दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजना वनाउन समय दिएको छु । नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकबाट नगरपालिकाभित्रका मुख्य–मुख्य चोकमा सौर्यबत्ती राख्ने निर्णय गराए । यहाँ अहिले पनि एक घर एक धारा भएको अवस्था छैन । एक घर एक धारा अभियान पनि पहिलो बैठकमै निर्णय गरेर अगाडी बढाएको छु । मैले हरेक वडा कार्यालय खोल्ने काम गरेको छु ।
सदरमुकाम वाहेक अन्य ठाउँमा पक्कि वाटो छैन । शिक्षा, स्वस्थ्य, विद्युत, खानेपानीको पहुँच सदरमुकामका नागरिकहरुले सहज रुपमा उपभोग गरेपनि गाउँका नागरिकहरुले पाएका छैनन । सबैलाई समान रुपमा सेवाको पहुँच दिने मेरो ध्येय छ । पाँच वर्षभित्र सबै वडामा पक्कि सडक वनाउने मेरो प्राथमिक योजना छ । हरेक घरमा एक धारा पु¥याउने, प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय वनाउने, हरेक स्वास्थ्यचौकीमा सहज रुपमा औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, विद्युतका काठेपोल पुरै फेरेर फलामका पोल हाल्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गरि गाउँ गाउँमा आयआर्जनमुलक उद्यम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
३) यी योजना सम्पन्न गर्न नगरपालिकालाई कति बजेटको आवश्यकता पर्छ र त्यसका स्रोतहरु के के हुन् ।
हामीले स्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने हामीलाई स्रोतको कमी छैन । हाम्रो जिल्लामा जलविद्युत आयोजना प्रर्याप्त छन् । विद्युत रोयल्टीले मात्रै पनि हामीले नगरपालिका चलाउन सक्ने अवस्था छ । मोदीखोलामा सात वटा जलविद्युत दर्ता छन् । तीन वटा त कुश्मा नगरपालिकाभित्र पर्छ । त्यसबाहेक कालीगण्डकी नदी, पर्यटकिय क्षेत्र, कृषि, जडिबुटी लगायत नै नगरका मुख्य स्रोत हुन् । मालपोत, एकिकृत सम्पतीकर र विद्युत रोयल्टी मुख्य आर्थिक स्रोत हो । कृषी क्षेत्र, वनजन्य उद्यम, जडिबुटी लगायत नै नगरका मुख्य स्रोत हुन् । मालपोत, एकिकृत सम्पतीकर र विद्युत रोयल्टी मुख्य आर्थिक स्रोत हो ।
केन्द्रमा सरकार भएजस्तै स्थानीय तहमा हामी सरकारको भुमिकामा रहेका कारण हामीलाई पनि स्थानीय सरकारको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो । हामीले जनतालाई सिंहदरवारको अधिकार गाउँसम्म भन्ने नारालाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ । हामीले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौँ । जनतालाई भने जस्तो सेवा दिन सकेका छैनौँ । हामीले सरकारको भुमिका खेल्न नसक्नुको अर्को कारण म अल्पमतमा छु । नगर प्रमुखले केही निर्णय नै गर्न सक्दैन । अब नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएपनि म साझा व्याक्ति भएको छु । म कुनै पार्टिको टिकट ल्याएर आएको भएपनि म साझा हुँ भनेर काम गर्न पाएको छैन । मैले यो वा त्यो, पक्ष वा विपक्ष भनेको छैन । तर नगर कार्यपालिकामा एमालेको वहुमत हुँदा मैले संवैधानिक अधिकार सही रुपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन । त्यैपनी सेवामा मैले कुनै कसुर वाँकि राखेको छैन । मेरो स्वार्थका लागि नभएर नगरवासीहरुको हितमा काम गरेको छु ।
यहाँका सबै दल एक नहुँदा नगरबासीका आशा र अपेक्षा पुरा हुन सक्दैनन । एकैपटक सबै काम गरेर मैले पुरा गर्न त सक्दिन । राजनीतिक दलहरुमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने राम्रो थाहा छ । जनतालाई विकास दिन राजनीतिक दल एकमत भएर लाग्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो पदको हैषियतले सहजीकरण गरिरहेको छुु । राजनीतिक रुपमा वजेटको वाँडफाँड गर्नुहुन्न हामीले जनताको आवश्यकताको आधारमा वाँडफाँड गर्नुपर्छ, योजना छनौट गर्दा तल्लो स्तरका गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका साथीहरुलाई भनेको छु । सबैका मागलाई अहिले नै समाधान गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौतिका रुपमा लिएको छु । यस्ता समस्यालाई राजनीतिक रुपमा नभई आवश्यकताका रुपमा वुझनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
६) तपाईंको नगरलाई अन्य नगरभन्दा फरक नगरको रुपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरु के के हुन् ?
मैले हाम्रो नगरपालिका अरुभन्दा फरक छ भनेर मैले भन्न पर्दैन । कुश्मा चिनाउन धेरै टाढा जानुपर्दैन । मुलुककै अग्ला पुलको शहरका रुपमा कुश्मा चिनिएकै छ । कुश्मामा पर्यटकीय माध्यमबाट धेरै विकास गर्न सकिन्छ । अग्ला पुलसँगै चर्चित गुफाहरु यहि छन् । कालीगण्डकी नदीमाथि बञ्जीजम्प निर्माणको क्रममा छ । कालीगण्डकी राजमार्ग निर्माणाधिन छ । कुश्मा धौलागिरीकै प्रवेशद्धार पनि हो । मुस्ताङसम्म जाने पर्यटकलाई कम्तीमा पनि एक रात कुश्मामा राख्ने ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । अहिले मुस्ताङ जाने अधिकांश पर्यटकहरु कुश्मा झरेर अग्ला पुलसहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्कने गरेका छन् । यो सकारात्मक पाटो हो । स्थानीय, राष्ट्रिय तथा बिदेशी लगानीलाई कुश्मामा भित्राउन पहल गर्ने, उर्जा, पर्यटन, कृषिका साथै उत्पादनमुलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवम् ब्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित योजना ल्याउने सोचमा छु यो भयो भने हामी अरु भन्दा धेरै फरक र धेरै समृद्ध वन्छौँ । उन्नत बीउ, कर्जा, बीमा, बैकल्पिक उर्जा, साना जलबिद्युत र सिंचाईका आयोजनाहरुमार्फत उत्पादकत्व बढाउने, बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा जान तयार युवालाई सीप दक्षता, पुँजी र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनमा लगानी गर्ने कुश्मामा उत्पादकत्व बढाएर समृद्धि गराउने मेरो परिकल्पना रहेको छ ।
जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको वीचमा द्धन्द भयो भने सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ भन्नेमा म सचेत छु । शुरुमा हाम्रो कर्मचारीहरुका वीचमा जनप्रतिनिधीहरुको सम्वन्ध निकै राम्रो छ । उहाँहरुमा प्रसासकिय क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । हामी समाज र जनआकांक्षाका वारेमा अनुभवी छौँ । हामीले यि दुर्व अनुभवहरुको समायोजन गरेर काम गरिरहेका छौँ । कर्मचारीहरुले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु । मेरो उदेश्य आफुले पनि एक रुपैयाँ भष्ट्रचार गर्दिन र कर्मचारीहरुले पनि एक रुपैयाँ भष्ट्रचार गर्न पाउन्न भनेर मैले पहिलो वैठकमै कर्मचारी संग वसेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छु । कर्मचारी लाई द्धिविधा भएको कुरा जनप्रतिनिधी र जनप्रतिनिधीलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा कर्मचारीलाई सोधेर सहजीकरण गर्ने काम गछौँ । हामीहरुको वीचमा सुमधुर सम्वन्ध छ ।
क्यान्सर पिडीत गौतमलाई छिमेकी र गाउँबासीले गरे आर्थिक सहयोग 81
केन्द्रिय सदस्य गोविन्द अधिकारी सम्मानित 111
स्वास्थ्य केन्द्रको भवनका लागि तिस लाखको जग्गा दान 2687
मृगौला पीडितलाई २ लाख ५५ हजार सहयोग 96
ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु एक घाईते 534
खुर्कोटमा नागरिकहरुवीच सार्वजनिक सुनुवाई 122
नेकपाका संस्थापक कर्मचार्यको स्मृती दिवस पर्वतमा 251
कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालय सार्न माग 217
कश्यप गोत्रिय अधिकारी प्रतिष्ठानको सम्मान र बधाई कार्यक्रम 162
कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ४ ले ग¥यो सार्वजनिक सुनुवाई 83
समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य, एनआरएन उपाध्यक्ष 1016